Home » Products » Laboratory Fitaovana » Laboratory Centrifuges
Sitrano Force hafainganam-pandeha avo centrifuge manokana Neofuge 13 manome centrifugal fiantraikany tsara ary mora ampiasaina amin'ny avo sy ny fiarovana azo itokisana. Dia azo ampiasaina amin'ny laboratoara be, toeram-pitsaboana sy ny fikarohana ireo toeram-pampianarana.
Sitrano Force hafainganam-pandeha avo centrifuge manokana Neofuge 13R manome centrifugal fiantraikany tsara ary mora ampiasaina amin'ny avo sy ny fiarovana azo itokisana.
- Maximum haingam-pandeha 15000rpm
- ambony indrindra zakantsika 24 × 1.5 / 2.0ml, 16 × 5ml
- Temperature isan-karazany -10 ℃ ~ 40 ℃
Sitrano Force 15 Neofuge manome ny fahafaha-miasa ny telo centrifuges: avo-afaka, general-tanjona ho an'ny sela centrifuge fijinjana; dia haingam-pandeha noho ny centrifuge efitra mampisaraka lysates; ary ny microcentrifuge ho an'ny ADN precipitations.
- mihodina hatramin'ny 16.000 isa-minitra ny 20.800 × h
- Max. afaka ny 400ml
- Induction fiara tsy misy karbaona borosy
- Mahery Motors ho fohy haingana sy ny fotoana braking
- Malalaka isan-karazany sy ny Modular adapters Accessories
Sitrano Force Neofuge 18R laboratoara centrifuge, manome vokatra tsara centrifugal sy mora ampiasaina amin'ny avo azo itokisana sy mandry fahizay, dia be mpampiasa tany an-tsaha ny molekiolan'ny sy biochemical fikarohana, sy ny fitsaboana aretina.
- Small laboratoara ara-pitsaboana
- mpikaroka sy ny molekiolan'ny biolojika fikarohana
- fiasa fanadihadiana in indostrialy laboratoara
Sitrano Force Neofuge 1600 benchtop laboratoara centrifuge mametraka ireo fitsipika ao toetra, famolavolana, ary ny fanavaozana avy amin'ny lova ny traikefa nandritra ny taona maro. Neofuge 1600 javatra iray manome ambony indrindra fampiharana anisan'izany ny avo-afaka, general-tanjona ho an'ny sela centrifuge fijinjana; dia haingam-pandeha noho ny centrifuge efitra mampisaraka lysates; ary ny microcentrifuge ho an'ny ADN precipitations.
Sitrano Force Neofuge 1600R benchtop laboratoara centrifuge mametraka ireo fitsipika ao toetra, famolavolana, ary ny fanavaozana avy amin'ny lova ny traikefa nandritra ny taona maro. Neofuge 1600R manome ambony indrindra ao anatin'izany ny fampiharana javatra iray avo-afaka, general-tanjona ho an'ny sela centrifuge fijinjana; dia haingam-pandeha noho ny centrifuge efitra mampisaraka lysates; ary ny microcentrifuge ho an'ny ADN precipitations.
Manasongadina mahery, fikojakojana-maimaim-poana Motors, Centrifuge Neofuge 23R accommodates isan-karazany sy ny spins rotors takelaka / fantsona avy 0.2ml ny 4 × 180ml amin'ny ambany-to-hafainganam-pandeha avo ho an'ny isan-karazany ny fampiharana.